Nagu saabsan - Hebei Jinqu Products Birta Co., Ltd.
Hebei Jinqu Metal Products Company Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2005 ee degmada Anping. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag 30,000m2 ah, oo ay ku jiraan afar aqoon isweydaarsi wax soo saar, laba bakhaar iyo aqoon isweydaarsi kormeer.
Injineeradayadu waxay la socdaan khibrad 10 sano ah waxaanan aqbalnaa OEM iyo Customization.
Hantidhawraha Qiimaha ayaa si adag u xakamayn doona kharashka wuxuuna dammaanad qaadayaa macmiil kasta inuu heli karo waxaad bixisay.
Waxaan ku takhasusay soo saarista mesh silig iyo dhoofinta. Dhuxusha dhuxusha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aan soo saarno.
Iyo mesh mesh lagu dubo oo la tuuro ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay suuqa Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Australia iyo wixii la mid ah.
Wax soo saarka miiqda BBQ maalin walba waa 300,000 oo gogo '. Amarka joogtada ah ee Japan waa 12 konteenar bishiiba.
Waxaan awood u leenahay inaan ku siino mesh silig tayo sare leh BBQ oo leh qiimaha warshadda iyo gaarsiinta degdega ah.
Waxaan ku bixinay khadkayaga wax soosaarka iyo mesh mesh waxaa ka mid ah mesh birta birta ah, Wareega bbq mesh grill, mesh barbecue mesh, shabakad solay leh gacmo qabasho, mesh mesh shabag ah, Japan mesh silig gorgor la tuuro, mesh mesh giraan la tuuro.
Hadafkeenu waa inaan siino sida ugufiican ee adeegyadeena si buuxda oo daacadnimo iyo hufnaan leh iyadoo la ilaalinayo heerarka ugu sareeya ee tayada iyo waxqabadka, waa inaan bixinaa xalka ganacsi hal abuur leh oo macquul ah kaas oo sidoo kale naga caawinaya inaan ku hogaaminno balan qaadka si aan uga badnaano macaamilkayaga rajadiisa, waa inaan abuurno xaalado shaqo oo aamin ah oo aamin ah shaqaalaheena fursadaha ugu badan ee ka caawinaya inay la koraan shirkadda.
Waxaan ku kalsoonahay in taageerada dhammaan wada-hawlgalayaashayada iyo macaamiisheena iyo adkaysiga joogtada ah iyo dadaalka dadkeenna, dhammaan dadaalkeenna mustaqbalka ay sii wadi doonaan inay guuleystaan.
Hayso oo kor u qaad saamaynta noo brand duurka mesh silig Grill.
Qiimaha u dhigma qiimaha iyo kor u qaadista adeegga, waxaan macaamiisha ka dhigeynaa guul-guul.
1) Iyadoo ka badan 15 sano soo saarista mesh silig
2) Kooxda Iibka Xirfadlayaasha.
3) Adeeg kaamil ah iibka kadib
4) Injineer khibrad leh iyo shaqaale xirfad leh
5) Daacadnimo iyo xilkasnimo
6) Baadhitaanka alaabada kahor dhalmada.
7) Warshaddeena waxay kudhowdahay dekedda rarka, waxay aad ugufiicantahay rarka.
8) Shahaadada ISO9001, SGS iyo imtixaanka dhinac saddexaad